Tweeting is a human right - also in Nigeria
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Nigeria Breaking News » Tweeting ikodzero yemunhu - zvakare muNigeria
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • tsika nemagariro • dzidzo • Entertainment • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • Nigeria Breaking News • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mabhizinesi eNigeria, vashandisi vanoshora kumiswa kweTwitter munyika
Nigeria yakadonhedza madonhwe mashanu, kusvika zana nemakumi maviri, mu120 World Press Freedom Index yakanyorwa neReporters Pasina Muganhu, iyo yakatsanangura Nigeria seimwe yenyika "dzine njodzi uye dzakaomarara" muWest Africa kune vatapi venhau.
Hurumende yeNigeria inotarisirwa kubvisa Twitter 'munguva pfupi'.
Hurumende yeNigeria yeTwitter inorambidzwa zvakanyanya munyika.
Rusununguko rwekutaura ruchidzikira nekukurumidza muNigeria.
Mushure mekukonzeresa kusagadzikana pakati pevashandisi venhau vezvemagariro nevaratidziri vekodzero dzevanhu nekuda kwekutyora rusununguko rwekutaura uye nekukuvadza nzira dzekuita bhizinesi muNigeria, hurumende yenyika ine vanhu vazhinji muAfrica yakati 'inotarisira' kubvisa chirango pa Twitter, chakaziviswa muna Chikumi , mu "mazuva mashoma".
Chiziviso chakamutsa tarisiro pakati pevashandisi veTwitter vane shungu dzekudzoka pasocial media chikuva mwedzi mitatu mushure mekumiswa kwakatanga.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko muNigeria, VaLai Mohammed vaudza musangano nevatori venhau mushure memakurukota nhasi kuti hurumende yenyika iri kuziva kushushikana uku Twitter ban yakanga yagadzirwa pakati pevaNigeria.
"Kana kuvhiya kwakamiswa kwemazuva angasvika zana ikozvino, ndinogona kukuudza kuti tiri kungotaura nezve mashoma, mazuva mashoma manje," akadaro Mohammed, pasina kupa nguva.
Paakamanikidzwa kuenda kumberi, Mohammed akati zviremera nevatungamiriri veTwitter vaifanirwa "kuisa ini uye kuyambuka maT" vasati vasvika muchibvumirano chekupedzisira.
"Zvichangova zvikuru, munguva pfupi iri kutevera, chingotora shoko rangu kune izvozvo," mushumiri akadaro.
Hurumende yeNigeria yakamiswa Twitter kutanga kwaJune mushure mekunge kambani yabvisa chinzvimbo kubva kuMutungamiri Muhammadu Buhari icho chakatyisidzira vematunhu, avo vezvemagariro venhau vakati vakatyora mitemo yavo. Gweta guru reNigeria rakaenderera mberi richiti avo vakazvidza kurambidzwa vanofanirwa kutongwa.
Mukupindura, vazhinji veNigeriya neboka rekodzero dzemunharaunda vakamhan'ara kumatare edzimhosva vachida kubvisa kurambidzwa kwehurumende neTwitter, vachitsanangura danho rekumisa mashandiro enhau enhau senzvimbo yekuyedza kunyaradza kushoropodza.